musha nyika dzakabatana Vatambi veBasketball Kevin Durant Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nyaya Yakazara yemunyanzvi webhasikiti anozivikanwa kwazvo nezita rekuti ""KD“. Yedu Kevin Durant Yehucheche Nyaya pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakajeka zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino. Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yehupenyu pamberi pemukurumbira, nhoroondo yemhuri uye hupenyu hwega. Zvikuru zvakadaro, zvimwe OFF uye ON-Screen zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezvake.
Hongu, munhu wose anoziva iye akazvisimbisa semumwe wevatambi vakanakisisa vezera rake. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Kevin Durant's biography iyo iri inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Kevin Durant Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Kevin Durant akazvarwa musi we 29th waGunyana 1988 kuSuitland muMadganis USA. Mucheche Kevin aive wechipiri pavana vana akazvarwa kuna amai vake Wanda Pratt uye kuna baba vake Wayne Pratt (inoratidzwa pazasi).
Nezvemidzi yake, Kevin ndeweAmerica wenyika neveAfrica-America.
Kevin aive nemwedzi mishoma chete baba vake paakasiya mhuri. Nekudaro, iye akarerwa pamwe chete naamai vake pamwe nambuya amai paimba yekupedzisira muSeat Pleasant, Maryland. Yakanga iri kuna Ambuya Barbara imba iyo Kevin akakura pamwe nemukoma wake Tony pamwe nevanin'ina vadiki Rayvonne naBrianna.
Kevin Durant Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts: Dzidzo neKubata Buildup
Kevin akadzidziswa pazvikoro zvakasiyana-siyana paakanyora kushanda nesimba muBhikball. Zvikoro zvinosanganisira National Christian Academy, Oak Hill Academy uye Montrose Christian School.
Zvingava zvinonakidza kucherechedza kuti mutambi weBc Basketball haana kumbobhabhatidza mutambo mukuremekedzwa kwemakore ekutanga e10 ehupenyu hwake. Hungu, haana kumboita. Mumwe wemakore gumi nemana ainzi Kevin akaita sarudzo yekuvaka basa mumutambo, mushure mokunge atanga kunakidzwa kwekukwikwidza kwakanyanya, senhengo ye Prince George Jaguars iyo yakanga ine maAAU mapoka kumativi ose.
Ichisarudzo chakauya sezvo Jaguars yakakunda imwe yemakwikwi ayo enyika neKevin uyo akawana huni 18 muchikamu chechipiri chekupedzisira. Kevin akafara zvikuru mushure mechikwata ndokuudza amai vake kuti aida kutamba muNBA.
Kwakanga kusina muganhu pane izvo Kevin aigona kubudirira semukomana muduku achida kutamba muNBA. Pazera ra 13-14, akanga atomira pa 6 ft 0 kuti atyeke kubva kune vezera rake pachikoro chesekondari.
Nguva yacho yakaonawo baba vake kudzokera kuhupenyu hwake pamwe chete, vakatarisana neUnited States nokuda kwekukwikwidza basketball. Yakanga iri nyaya yemakore vasati vaduku vakatanga basa rekoroji rakagadzirisa nzira yake yekubudirira.
Kevin Durant Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts: Road To Fame
Kevin akaenda kukoreji kuUniversity yeTexas kwaakatanga basa rakamhanyisa rwendo rwake munzira yekune mukurumbira. Ndichiri kuUniversity Kevin anga aine anoshamisa nyowani gore achitamba yeTexas Longhorns uye kuhwina mibairo mizhinji. Nekuda kweizvozvo, akangopedza gore nechikwata zvisati zvaitika akamugadzirira gwaro muNBA neSeattle Supersonics.
Kevin Durant Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts: Rise Fame
Kevin akadavira Seattle iye zvino anozivikanwa seTurnder mugore rake rokutanga, achikunda Rookie weMugore wegore uye akava wechitatu NBA rookie (mushure meLeBron James naCarmelo Anthony) kusvika kuvhareji kupfuura 20 inongedza mutambo.
Akave akakurumbira mugore rake rechipiri muNBA kuti atungamirire sangano rekucherechedza, kupedzisa wechipiri shure kweLeBron James mukuvhota kweMVP uye kutumidzwa kunhengo yeAll-NBA. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Kevin Durant Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts: Ukama Hupenyu
Kevin Durant sevadzidzi vakawanda vema basketball vane muviri unoshamisa kuvaka nekunakidza mari inoita kuti madzimai amude seavo. Tinounza mashoko pamusoro pehukama hwake hwekare uye hwehupenyu Upenyu.
Chekutanga yaive hukama hwake hwekupokana nemuimbi weR & B, Letoya Luckett. Ivo vaviri vanonzi vakadanana kweanoda kusvika gore pakati paZvita 2011 kusvika Gumiguru 2012. Zvisinei, hapana kana mumwe wavo akatsigira runyerekupe urwu.
Tevere hwaive hukama hwake nemutambi webasketball Monica Wright. Ivo vekare-veshiri dzerudo vaive panguva yehukama hwavo mu2013 yakanyanya kutaurwa nezvayo nekuti ivo vakauya sevakakwana vemitambo vaviri.
Kevin naMonica vakaroorana mwedzi minomwe muhukama hwavo asi ivo vakafamba netsoka sezvo hukama hwakarova matombo 7 mwedzi yapfuura. Nepo zvikonzero zvekurambana zvisati zvajeka Kevin, panguva yekubvunzurudzwa mu11, akataura nezve kuzorora nenzira inotevera.
'Ndaiva nehanzvadzi, asi ... ndakanga ndisingazivi kuti, sei, kumuda, iwe unoziva zvandiri kutaura? Takangoenda nenzira dzedu dzakasiyana. '
Padivi pake, Monica anoti:
"Hongu, muhukama hwangu hwekupedzisira [neNBA All-Star Kevin Durant], ndaifanira kuita sarudzo yekuzvikanganisa semukadzi. Ini ndaifanira kutora danho rekusiya hukama, uhwo vanhu vazhinji vaifunga kuti ndaipenga kusiya. Paive nekushoropodzwa kwakawanda pamusoro pazvo. Asi ini ndinofunga Mwari vane musana wangu mazviri. Nekuti ndinobatirira pane zvandinoziva kuti ichokwadi, ndozvichapihwa mubairo waMwari pachinzvimbo chekuti vanhu pasi pano vanofunga kubata kwakanaka ”.
Hwechipiri hukama hwakaona Kevin date basketball player Jasmine Shine (inoratidzwa kuruboshwe pazasi) pamwe nemutambi, modhi uye muimbi - Crystal Renee.
Kevin ari panguva yeiyi positi kufambidzana nezera rezvivakwa rinozivikanwa saCassandra Anderson. Ivo vaviri vaidanana pamwe panguva ye2017 / 2018 mwaka.
Zvinotarisirwa kuti Anderson ane izvo zvinotora kuti achengetedze Kevin pasi uye chengetedza vanyori nguva yekunyora nezvehukama hwebasketball hunotevera.
Kevin Durant Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts: Upenyu hweMhuri
Kevin akaberekerwa mumhuri ye6. Tinokuudza mashoko echokwadi nezvemhuri yake.
Nezve baba vaKevin: Baba vaKevin, Wayne Pratt anoshanda semupurisa weCapitol kuLibrari yeCongress. Wayne anozivikanwa kunge akasiya mhuri yake apo Kevin aive mucheche. Achitaura makore gare gare nezve sarudzo yake yekusazvibata, Kevin anoti:
"Ndainzwa sokuti ndakanga ndisati ndava mwana, ndaida, ndaive muduku. Ndakanga ndisingazivi kuti ndaizviwanirei ini, ".
Wayne, zvakadaro, akadzoka apo Kevin aive 13 uye akasanganazve nemhuri yake, zvichitungamira mukuzvarwa kwevanin'ina vaKevin vadiki Brianna naRayvonne.
Nezve amai vaKevin: Amai vaKevin Wanda Pratt mukadzi akasimba uyo yakasimudza Kevin nemukoma wake wemakore matatu-mukuru mukoma kupokana nematambudziko ese. Iye anogara achitsigira amai vanoisa chimiro pamutambo wemwanakomana wavo.
Kune rake divi, Kevin ari padyo naamai vake vaakadoma semunhu ane simba muhupenyu hwake uye mu2014, akatenda amai vake paakagamuchira mubairo weMVP. Mamwe ruzivo nezve hunyoro, muzvinabhizimusi uye amai vanokurudzira vanokwanisa kuwanikwa pawebhusaiti yake yakanzi, Amai Durant.com.
Nezve hama dzaKevin: Kevin anonyanya padyo nemukoma wake Tony waakakura naye kwemakore mazhinji kusvika kwevanun'una vake. Achiendesa yake MVP yekugamuchirwa kutaura Kevin akataura zvinotevera nezve simba remukoma wake mukuru:
'Iwe wakandidzidzisa kuva nechivimbo mukati mangu, tenda mukati mangu; kuti ndaigona kuzviita kana ndisina kufunga kuti ndaigona kuzviita. '
Zvakakosha kucherechedza kuti Tony aiva nekodhi yakanaka yekateball basketball, asi kusiyana nehanzvadzi yake, haana kumboita kuNBA.
Mudukuduku anozivikanwa pamusoro peKevin vana vadiki vaduku Rayvonne kana Briana. Muchiedza chakafanana Hapana Kevin, amai vake kana Tony vane mifananidzo yevaduku vemu mhuri mumabhuku avo evanhu.
Nezve hama dzaKevin: Achienda kubva kunhengo yemhuri yepedyo, hama inozivikanwa yaKevin ndambuya vake amai, Barbara Davis uyo akamubatsira kumurera.
NdiBarbara uyo akaita kuti Kevin agadzikane nehurefu hwake husina kujairika nekugara achimuudza kuti ndezvechikonzero chakanaka. Zvakanaka, nguva yakaratidza kuti anga asiri kukanganisa.
Kevin Durant Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts: Kubvumira uye Kuzvipira
Kevin Durant, kufanana naye Lebron James, ine huwandu hwekutsigira hunoenderana nekufadzwa kwemari yake. zvinosanganisira avo vane Nike, Beats, Sonic, American Family Insurance, Alaska Airlines, Gatorade, Panini, General Electric, uye 2K Sports.
Achienda kure kubva kune Endorsements, Kevin apinda mubhizinesi renyika kuburikidza neyake Silicon Valley-based start-up inozivikanwa seDurant Company (yakavambwa 2016). Iyo kambani ine inopfuura makumi matatu ekudyara mu tech ventures, kusanganisira Acorns uye Postmates. Naiye ane chekudya, iyo inonzi KD's Southern Cuisine.
Kevin Durant Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts: Anofunga NezveTattoos.
Kevin ane akati wandei anoonekwa maTattoos. Isu tinokuunzira iwe hunyanzvi hwemuviri uye zvinoreva kumashure kwega kwega. Kutanga nemusana wake chiso chaJesu chine ndima kubva kuna James 1: 2-4, inoti:
“Chimbozvitora sechipo chipo, shamwari, apo bvunzo nematambudziko zvinouya kwauri kubva kumativi ese. Iwe unoziva kuti pasi pekumanikidzwa, yako yekutenda-hupenyu inomanikidzwa kupinda pachena uye inoratidza ayo echokwadi mavara. Saka usaedze kubuda mune chero chinhu nguva isati yakwana. Rega iite basa rayo kuti iwe uve wakakura uye wakasununguka, usashayikwa nenzira ipi neipi ”.
PaTorso yake pane zvinyorwa zvinosanganisira zita rambuya vake Barbara, zita raamai vake Wanda, Chinyorwa kubva kuna Zvirevo 15 ndima 33 iyo inoti: 'famba nekutenda kwete nekuona'. Kune zvakare Washington Nationals-yakanyorwa kuti "W" iyo inopa rukudzo kuguta rekumusha kwake kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweWashington DC.
Achienderera kumberi kwegumbo rake reruboshwe, Kevin ane tattoo ye2pac nepo paine hunyanzvi hwaRick James pachidya chake chekuruboshwe. Iwo maTattoo anoratidza kukudzwa kwake uye kuonga kwemafungiro evanononoka kuvaraidza nevamiriri.
Kevin Durant akave akawana tattoo yaRick James pachidya chake (kuburikidza @stevewiebeInstagram) pic.twitter.com/tV1V5fcdEa
Kevin Durant Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts: Personal Life Facts
Kevin ishamwari yechikoro uye yekare yemunhu anoedza kuva iye akakodzera mukuedza kwake asi iye ari wake wechokwadi. Zvinofadza Kevin hazviomeseri kufadza. Nzira yakanakisisa yokuva nehurukuro yekukurukura naye inopfuura kudya kune chero ipi zvayo yemvura inenge ine mamiriro akanaka, magetsi uye kutamba mapoka. Takati hazviomeseri kufadza here ?.
Nezvezvinhu zvekutenda, Kevin muKristu ari kunetsekana anoshuvira kukura pamweya nekuyedza kuita kuti kufamba kwake nekutenda kuve nani zvishoma. Ehe, tese tiri kunetseka.
Kevin Durant Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts: Other Life Facts
Kevin akaedza kuita mu 2012 nekuonekwa mufirimu yevana Thunderstruck.
Akatanga kupfeka #35 sejeresi nhamba panguva dzekutanga kwebasa rake mukukudza mutungamiri wake AAU, Charles Craig, uyo akaurayiwa munguva ye35.
Kunze kwekutamba Basketball, Kevin anoda kuverenga uye aiva mumwe wevanozivikanwa kuti vanyori ve Super Bowl 50 mu 2016.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Kevin Durant Childhood Story pamwe chete biography nhoroondo. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!